သငျသညျအခြားဘက်ခြမ်းကိုတွေ့မြင်နှင့်သင့်အပြုအမူအတွက်နှောင့်အယှက်ကိုနှစ်သက်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုရှာဖွေလိုပါသလား? အထူးကုအမျိုးသမီးတွေအတွက်အဘယ်အရာကိုသူတို့ရဲ့အများဆုံးနှောင့်အယှက်မေးမြန်းခြင်း, တစ်ဦးရှည်လျားသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ကြသူလူတို့တွင်စစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာတွင်က လာ. , အဘယ်အရာကိုပါပဲ။
အတော်များများကမိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်သူတို့ဘဝအတွက်အပေါငျးတို့သဖြစ်ရပ်များ၏ရက်စွဲများသတိထားဖြစ်သင့်ကြောင်းယုံကြည်, ပင်သူတို့အားဥပမာအားတိကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို, သင်ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်သို့သွားကြ၏သို့မဟုတ်နှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာနေ့ကိုမရှိဘူးတဲ့သူ။ ယောက်ျားသည်ကင်လုပ်ခိုင်း, ဤရက်စွဲများရယ်စရာ, သူ့မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေဖျက်ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအဘို့အမကျေနပ်မှုနဲ့တူလှပါတယ်။
များစွာသောမိန်းမအတိတ်သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးထူးဆန်းတဲ့နှင့်ဝရမ်းမဲ့အကျိုးစီးပွားခံစားရသည်။ သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အနီးကြောင့်ယခင် Darling မှတ်မိဖို့သူ့ကိုအတင်း? ဒါဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့သည်နှင့်နှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ပါ။
3. ကောင်းပြီ, ငါအဆီလော
မည်မျှကြိမ်နေ့၌သင်တို့အား, ချီးမွမ်းအတူတက်လာရန်သင့်အားချွေးသိပ်ဖို့နှင့်ပဋိပက္ခနှိုးဆော်ခြင်းငှါမဟုတ်ပြီးသားပင်ပန်းသောရွေးကောက်ဖို့ဤမေးခွန်းကိုမမေးကြဘူး, ကဝန်ခံ။ အမျိုးသမီးများပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်မေတ္တာတော်ကို၏စကားကိုနားထောငျလိုအဖြစ်ဆိုး၏စကေးချဲ့ကား။ ခိုင်မာလိင်ကိုယ်စားလှယ်များတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနည်းဗျူဟာရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည်။
ယောက်ျားသည်, ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရန်အရေးကြီးပါသည်, ဒါပေမယ့် metered နှင့် overprotective သို့ကူးပြောင်းသည်မဟုတ်အခါ။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများမှာ, ရှူရန်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ တစ်ဇွန်းနှင့်အတူသူ့ကိုအစာကျွေးဖို့ကနွေးနွေးထွေးထွေးဝတ်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရန်, ငါ့ကိုယုံကြည်သူမိခင်တစ်ဦးရှိကြောင်းသည်တစ်ဝက်နာရီသူမ၏ချစ်သူကိုတောင်းဆိုရပ်တန့်။
ယုံကြည်မှု၏ 5. မရှိခြင်း။
အကြောင်းရင်းမနာလိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယူသောအခါဂျိမ်းစ်ဘွန်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာပြင်ပမှာသောက်ပါတယ်။ , ဖုန်းများနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းပြောဆိုမှုများနားထောင်ခြင်း, စောင့်ကြည့် - နဲ့ဘာလုပ်နိုင်မင်းသမီး၏ဖွင့်နိမ့်ဆုံးပါပဲ။ ဤအမှုအလုံးစုံမသာနာကျင်ကျိန်းစပ်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းဆက်ဆံရေးဦးသေဆုံး။
ဟုတ်ပါတယ်, ယောက်ျား - အောင်နိုင်ပေမယ့်အဆက်မပြတ်တခြားသူတွေနဲ့ပရောပရည်, သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုနှိုးဆော်ခြင်း - ဤမှားယွင်းသောနည်းဗျူဟာပါပဲ။ , ထိုမိနျးမကိုအခြားယောက်ျားနှင့်အတူ flirts ရသောစုံတွဲတစ်တွဲအကြှနျုပျကိုမယုံခြင်း, ပြုတ်ဖို့အချိန်သူမ၏မိတ်ဖက်တပါးနှင့်ရယ်စရာနှစ်ဦးစလုံးကြည့်ရှုသည်။
မိန်းမတို့သည်ယောက်ျားသူတို့အကြံအစည်ကိုခန့်မှန်းဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းမပြုလုပ်သင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တဲ့အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ခိုင်မာလိင်ကိုယ်စားလှယ်များသူတို့တူတစ်ခုခုကိုကြားလျှင်, ပေါက်ကွဲခြင်း၏ခါနီးပေါ်မှာ "ဒါပေမယ့်သင်ကခန့်မှန်းခဲ့တာလဲ" "ဒါဟာခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲခဲ့တာလဲ" ။ , စိတ်ပျက်ချင်တိုက်ရိုက်မပြောတတ်ပေမယ့်ပဟေဠိအတွက်မကစားဘူးမထားပါနဲ့။
ဒါကြောင့်အပေါ်ရေချိုးခန်းထဲမှာ, အိပ်ရာ, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ, နှင့်: အတော်များများယောက်ျားထိုလူအပေါင်းတို့သည်အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဆံပင်ရှာဖွေတာငြီးငွေ့ဖြစ်ကြောင်းညည်းညူ။ သငျသညျမိမိအရှေးခယျြမှုစိတ်ဆိုးချင်ကြဘူးလျှင်, ဤအသိပေးချက်စဉ်းစားပါ။
9. ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်း, မျက်ရည်ကျ။
တစ်ဦး Win-Win နည်းဗျူဟာမျက်ရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှု, ငါ့ကိုယုံကြည် unsubstantiated ဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့, စစ်တမ်းများဆန့်ကျင်ပေါ်, ကျူးကျော်များ၏တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားစေ, များစွာသောလူတို့သညျနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြပြီးမျက်ရည်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ကပိုမိုအားကောင်းလိင်ပျော့ပြောင်းသောကွောငျ့, မည်သည့်အခါသမယတွင်ငိုမလိုအလွန်ခက်ခဲသည်။
သူတို့ရဲ့အသံတရားမျှတရန်ပျက်ကွက်ဘယ်မှာများစွာသောအခြေအနေနောက်ထပ်အကျွမ်းတဝင် - "။ ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးပါပဲ" ဒါကြောင့်မြို့ရိုးအစလက်သည်းရိုက်ရန်လိုအပ်သောအခါဒါဟာပြုမူနိုင်ပေမယ့်သင်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာဝန်ရှိများကဲ့သို့ပြုမူရန်မလိုအပ်သည့်အခါ။
တခြားသူတွေရဲ့ 11 ဝေဖန်။
ဤသည်ကား, မျှတတဲ့လိင်၏အထူးသဖြင့်ကတခြားကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးရန်ဖြစ်နိုင်များစွာသောမိန်းမ၏သဘောသဘာဝဖြစ်တယ်, အခြားသူတွေ။ တခြားသူတွေရဲ့ချို့ယွင်းချက်၏ပျော်စရာ Making - မသာရုပ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းမိုက်မဲနှင့်အနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့သက်သေခံ၏။ အမျိုးသမီးအတင်းဘေးမှာယောက်ျားမသက်မသာခံစားမိ, ဤအသံ၏စိတျထဲမှာတစ်ဦးတည်းသာထားသောစာပိုဒ်တိုများ: "သင်၏နှုတ် Shut!" ။
ဒီနေရာတွင်သူသည်သင်တို့ likes သို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, ရွေးကောက်မေးဖို့မည်မျှကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ရေတွက်? ပြင်းထန်သောယားယံသောအနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းအဖြစ်ကြည့်မေးမြန်းကဲ့သို့သောယောက်ျားသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အများစုအတွက်အားကောင်းလိင်ကိုယ်စားလှယ်များ, သူတို့ပဲကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုပြောပါတယ်နောက်နေ့များမှာလျှင်, ဘာမျှပြောင်းလဲသွားပြီ, ချစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမေးရန်မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်း။ ယုံကြည်
သာယောက်ျားပြင်းထန်တဲ့စေသည်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးရာအလွန်မိုက်မဲအမှား။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့လျှင်, တစ်ဖက်ကိုအပြစ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေပါက၎င်း၏ "လက်ဝဲ" တွန်း။
14. တကငါ့ကိုသနား, ဒါမကောင်းတဲ့ပါပဲ။
မည်သည့်ပဋိပက္ခသို့မဟုတ်အမှားယောက်ျား အကယ်. မိမိအမိသို့မဟုတ်ရည်းစားအကြောင်းကိုတိုင်ကြားဖို့ဖုန်းကို run ။ ဤသည် annoys နှင့်ကြမ်းပြင်ကိုဆင်းတဲ့ကြီးမားတဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျနည်းနည်းနဲ့မိမိအရွေးချယ်ခံနှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်, ငါ၏မိခင်နှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများက "ဆိတ်သငယ်ကို" အဖြစ်ကမှတ်ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ယောက်ျားထက်သာလွန်ခံစားရချင်နှင့်အရေးပါမှုကို "ခိုင်မာတဲ့ကြမ်းပြင်" နဲ့လိုက်လျောရန်။ သူတို့ရဲ့ရှေးခယျြတဦးတည်းဒါပေါ်အလင်းမီးသီး, faucet ပြုပြင်ဝက်အူများနှင့်ပါလိမ့်မယ်လျှင်ငါ့ကိုမယုံကြကြိုက်ကြဘူး။
နားလည်ဆက်ဆံရေးမကြာသေးမီကစတင်နှင့်နေပြီမင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းကိုပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သည် - အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်ပါက repels ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့သင်တန်းအားလုံးသွားကြကုန်အံ့ သာ. ကောင်း၏, လူသူတဦးတည်းဒူးပေါ်တက်ရလိမ့်မယ်သေချာအခါ။
33 အရှိဆုံးရယ်စရာ SIFCO
ထိုအခါငါဂရုမစိုက်ပါဘူး: ယခုဘဝ၌အဘယ်အရာကိုမျှဂရုမစိုကျဘူးသူတွေကို 30 သင်ခန်းစာများ,
လူ့ပျင်းရိခြင်း၏ 45 "တောက်ပ" ဥပမာ
ယနေ့ကျော်နှင့်ချမ်းမိတ်ဆက်ပေးသော 16 သမိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများ,!
သငျသညျနှစ်ကြိမ်ကိုကြည့်ချင်ကြဘူးကြောင်း 35 စပျစ်သီးကိုဓာတ်ပုံများ!
26 spooky စပျစ်သီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်
ဧဝရက်တောင်ထိပ်မှာလှပသောမင်္ဂလာဆောင် - ဘဝမှယူဆောင်အိပ်မက်
28 အထောက်အထားကြောင့်အချိန် - မယုံနိုင်စရာအရာတစ်ခုခုကို
ပျော်ရွှင်အိမ်မှာပျော်ရွှင်သူတဦးတည်းကြောင်း Soosh 22 နွေးသရုပ်ဖော်ပုံများ!
ရှားပါးချွတ်ယွင်းလူတစ်ဦးနှင့်အတူဤမော်ဒယ်အလှတရားအပေါငျးတို့သ Canon ငြင်းပယ်ခဲ့သည်!
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မိုက်မဲ၏ 19 အရိပ်
အဘယ်ကြောင့် 23 23 အကြောင်းရင်းများ - တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအသက်အရွယ်
သီရိ Mariamman ဘုရားကျောင်း
ကြံ့ခိုင်ရေးချက်ပြုတ်နည်းများ - တစ်မှန်ကန်သောနှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာ
သကြားလုံးများကိတ်မုန့် - မာစတာရုံးများ
ငါ့ဦးခေါင်းအတွင်းဆူညံသံအနေဖြင့် tablet များ
ခြေသည်းအ - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2014
လက်သည်းဖိုင်မှတ်တမ်း Cuticle ဖယ်ရှားရေး